Aironux, baddal cusub oo lagu soo dejiyo muusikada | Laga soo bilaabo Linux
Ma ahi taageere weyn Macaamiisha P2P waqtiga muusikada soo dejiso, Waxaan doorbidaa inaan soo dejiyo albums dhan boggaga qaarkood. Laakiin waa wax caadi ah, inay aniga ila tahay inay ahayd loo baahan yahay mid raadso kala duwanAan la heli karin Ares on Linux, waxaan leenahay Qaboojiyaha (farac ka mid ah limewire) laakiin in lagu qoro Java waxay cuntaa ilo badan. Waan ku barayaa Aironux, barnaamij yar oo loogu talagalay Linux kaas oo naga caawin doona inaan soo dejino muusikada aan rabno 🙂
Hagaag waan ogaaday Aironux HalkanWaa beel aan in badan soo noqnoqdo. Waxay ku qoran tahay Python y GTK (la jaan qaada labadaba) GTK2 sida la socota GTK3), oo ku raadi heesaha internetka a algorithm, ma adeegsado server Peer 2 Peer. [Mawduuc Ka Baxsan] ka qayb galay tartankii sanadkii hore, the Muuqaal Beta 2011, halkaas oo horumariyayaashu ay kula tartamaan barnaamijyadooda Homebrew iyo cayaaraha barnaamijyada kala duwan (waxaa jira abaalmarino wanaagsan Dabcan) [Dhammaadka Mawduuca Ka Baxsan]. Abuuraha waa adeegsade NIDAAMKA BIRTA.
Markii hore waxaa jiray nooc loogu talagalay Windows iyo Linux, iyo Waxaan lahaa mid loo qorsheeyey Mac OS. Laakiin qoraaga ayaa go’aansaday Solo la soco horumarka nooca ah Linux, maaddaama ay jiraan noocyo badan oo barnaamijyadan ah oo ka socda barnaamijyada kale. Aynu ku bilowno rakibaadda, Waxay ula muuqataa iyaga? 🙂
Waxa ugu horeeya ee aan sameyn doono ayaa ah rakibi ku tiirsanaanta qaar ka mid ah waxaa u baahan Aironux. Kuwani waa:
Python-wxversion Python-ogeysiis Python-pygame Python-gst0.10
En Debian iyo deriviyada waxaan u samayn lahayn sidan:
sudo apt-get rakibi python-wxversion Python-ogeysiis Python-pygame Python-gst0.10
Tan waan ku dhaqaaqnay hoos u dhaadhac xirmadan soo galiyay qoraaga DropBox. Maxaa waxaan furaa halka aan rabnoWaxaan ku sameeyay gurigeyga). Waxaan galnaa galka waan fulinaa faylka "aironux.sh»Oo liiska soo dhaweynta ayaa furmaya.
Waa mid dareen leh, «Raadi»Waxaan qori karnaa magaca a hees, iyo si fiican, raadi (waxaa laga yaabaa inay qaadato xoogaa, dulqaad). Markaan helno liiska heesaha, waan awoodnaa soo degso ama dhagayso ka hor, si loo hubiyo inay tahay ta aan raadineyno. Faahfaahinta waa haa waan dhoofnay internet-ka intaanu heesayno, malaha dhagayso cut.
Gudaha «Download«, Waan arki doonnaa faylka maxaan soo degsaneynaa, horumarkaaga, iyo ikhtiyaarka lagu joojinayo soo dejinta la xushay.
Gudaha «qaabeynta«, Waan beddeli karnaa Download buugga (doorbid ahaan ma laha astaamo ama astaamo qalaad oo magaca ku jira).
Hadda, «faahfaahin yar"Waxaan helay:
Ma awoodin inaan isticmaalo a digaag si aad u socodsiiso arjiga.
Heesta waxaa la maqlaa iyada oo la jaray haddii aan dul marno intaan ciyaarayno (ka yimid «Search» menu).
Xilligan oo keliya taas. Waa muhiim in la yiraahdo in kastoo laga yaabee inaysan hadda kaamil ahayn, noqon kara aad u fiican qaababka mustaqbalka (gaar ahaan in la horumariyo si gaar ah loogu talagalay Linux). Sidoo kale, yeelashada waxyaabo kale waligeed ma xuma.
Dhamaan waad salaamantihiin 😛
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Aironux, baddal cusub oo lagu soo dejiyo muusikada
Waxay u egtahay mid fiican, anigu waxaan ahay wax badan oo noocaan ah maxaa yeelay waxaan badanaa raadiyaa waxyaabo gaar ah halkii aan ka heli lahaa albums dhameystiran: 3 Waxaan rakibaa isla marka dayactirka gurigeygu dhammaado: B
Ah wanaagsan xD Waqtigan xaadirka ah waxaan u isticmaalaa inaan ku dhagaysto heesaha inta aan ciyaarayo Quadrapassel 😛 Waxaan dhageystaa hees gaar ah, waxaan raadiyaa albumka waana soo dejiyaa xD
Waxaan ku tijaabiyay Arch Linux oo si fiican ayey u shaqeysaa sidaan ujeclahayna waxaan xirmada u galiyay AUR: https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=55971
Wanaagsan, waad ku mahadsantahay inaad sameysay 🙂 (kuwa leh Arch)
Jawaab METALMANIAC BCN
Wanaagsan, waan tijaabinayaa oo 10kiiba XNUMX, waad ku mahadsan tahay, runtii waa fiican tahay; D
Aironux ma aqoon.
Waxaan ku rakibey lmde waxayna ka shaqeysaa tobankiiba.
Waxaan hayaa guddi sare oo leh dhowr launchers oo waxaan ku daray mid ka mid ah aironux.
Waxaan ku garaacay baarka, badhanka midig «ku dar guddiga», «launcher application caadadii»
In "amarka" waxaan dhigay python /home/pepito/aironux/data/ADR.py
Caadi ahaan ku beddel "pepito" isticmaalaha u dhigma.
Isla amarkaas, launcher ayaa lagu abuuri karaa Mint Menu.
Aad baad ugu mahadsantahay tilmaamaha AUROSZX!
Ku jawaab Teodoro Manzanares
Si deg deg ah u soo deg, waa fiicantahay
Barnaamijku waa weyn yahay, waad ku mahadsan tahay inaad soo dejiso nin
Barnaamijku aad buu u wanaagsan yahay, waan ogahay in qoraalkani waqti hore soo jiray ... laakiin wax fikrad ah kama qabin oo qofkii ku shubaa AUR wuxuu ahaa mufakir, Mahadsanid labadaba
Jawaab Juan Fran
Tillaabo talaabo ayaan u qaaday wixii aad ku dhigtay casharka, laakiin marka aad barnaamijka waddo ma furmayo daaqad kasta Haddii aad i caawin karto waan jeclaan lahaa. Salaan ka timid Peru.
Edd 1312 dijo
Waad salaaman tahay saaxiib .. Waxaan ku tijaabiyay Ubuntu 13.10 oo waxaan helay qalad waxaanan gartay in ku tiirsanaanta xirmada python wx, aysan ahayn tan loo yaqaan 'Python-wxversion' laakiin ay tahay tan lagu rakibay amarka.
sudo apt-hel rakibidda Python-wxgtk2.8
hello halkee baan kala soo bixi karaa barnaamijka? ka jawaab fadlan
Ku jawaab nayla
Waad salaaman tihiin, waad ka soo dagsan kartaan http://ironsistem.com/web/aironux/ 🙂
Aad u fiican, waad ku mahadsan tahay naftaada u huridda qalabkan.
Ku jawaab Zaza
Waxaan rakibay ku tiirsanaanta, waan soo degsaday xirmada oo waan furay, waxaan galay galka aironux oo aan fuliyay aironux.sh, waxay i siisaa qalad aniga oo leh "amarka lama helin".
Aad ayaan ugu cusbahay tan, uma akhriyo wax isku murugsan, laakiin ma aqaano waxa aan khaldamayo.
Waxaan isticmaalaa debian jessie, gnome jawiga garaafyada.
Ku jawaab eniac
Salaan Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo midig gujinaya aironux.sh, ka dibna aadaya Guryaha> Fasaxyada oo aad hubinaysa inay leedahay "rukhsad ay ku socoto". Sidoo kale, waa ay fiicnaan laheyd haddii aad isku daydo inaad ku soo bandhigto terminal, adigoo u beddelaya galka amarka "cd / path / to / the / folder" kuna fulinaya ./aironux.sh. Waad nuqulan kartaa khaladaadka soo baxa oo aad ugu soo shubi kartaa paste.fromlinux.net, tusaale ahaan, si aad uga dhigto mid la aqrin karo oo aan qashinka lagu daadin faallooyinka (si loo hadlo)
Arrin kale ayaa ah in barnaamijka aan dib loo cusbooneysiin sanado, ma ballan qaadayo inuu maanta shaqeynayo. Laakiin hadday sidaas tahay, waa hagaagsan tahay.